Fetin'ny Baiboly Sukkot
Sukkot, ny Fetin'ny Tabernakla, dia ny fotoana "fijinjana ny voaloham-bokatry ny sahanao"; koa fantatra koa amin'ny hoe Chag Ha'Asif, ny Fetin'ny fanangonana. Azo takarina amin'ny sehatra voajanahary, manokana ary ara-tantara izany. Amin'ny tontolo voajanahary, t ...
Greenhouse tsara indrindra
avy amin'ny admin tamin'ny 21-02-06
Greenhouse tsara indrindra ho an'ireo tia manao zaridaina sy tia ny endrik'ireo zavamaniry, dia hahita fomba hanamboarana ny tranonao miaraka aminy ianao na manao ahoana na manao ahoana. Na dia nitazona voninkazo tao anaty vazy na succulents aza ianao teo akaikin'ny varavarankely tao amin'ny trano fonenanao, raha manana trano kely ianao dia mety manana s ...
Trano fandraisam-bahiny PE Film Tunnel
Trano fandraisam-bahiny ho an'ny sary mihetsika PE mora vidy androany, te hampiditra trano fonenana fantsom-panafody-PE mora vidy aho. Namboarina avy amin'ny polyethylene UV maharitra maharitra sy maharitra ity tonelina ity dia matanjaka sy matanjaka. Ireo vy vita amin'ny vy nandrisika dia harafesina ary mora hidina amin'ny tany hiarovana ...
Fivarotana tsara indrindra - Tranolay antoko pista fanoherana afo
Fivarotana tsara indrindra -Fantohana antoko pvc fanoherana afo amin'izao fotoana izao, ny mpivarotra faran'izay tsara dia ny laozin'ny antoko PVC mahatohitra afo. Ity tranolay antoko PVC ity dia tsy ny mahazatra, satria ny retardant afo dia nampiana ny lamba PVC, izay mahafeno ny fenitra NF P92-507 M2 nolalovan'ny SGS. Rehefa mivory na manao fety ...
Fitsangatsanganana vaovao-mandeha amin'ny tranon'akoho
New Arrival-Walk in Chicken Coop Androany, te-hampiditra vokatra vaovao aho - Walk in Chicken Coop. Ity koopako ity dia mety indrindra amin'ny fitazonana ireo akoho ao anaty tokotanin'ala kely sy lehibe, hisorohana ny akoho tsy hirenireny, manome fiarovana ny orana sy ny masoandro ary mitazona azy ireo. akoho azo antoka amin'ny predat ...
Tranom-pandrenesana maro hafa - Tranolay misy fety an-tsarimihetsika mangarahara
Tranoben'ny antoko maroloko - Tranon-tsarimihetsika mangarahara anio, te hampiditra tranolay vaovao aho - tranolay fety misy mangarahara. Ity tranolay fety ity dia tsy hoe manana ny mampiavaka ny tranolay fotsiny, fa azo ampiasaina ho trano fandraisam-bahiny. Noho izany, multifunctional io ...
Endri-javatra sy ny fampiharana ny entona
Ny Features sy Applications Of Greenhouse Greenhouse dia karazana vokatra izay be mpampiasa indrindra. Izy io dia mety indrindra ho an'ireo mpitia zaridaina an-trano sy tantsaha izay mitady fomba hijanonana amin'ny tany mandritra ny taona. Ity vokatra ity dia afaka mampiseho tsara ny fahaizan'ny ireo vokatra mifandraika amin'izany ary mitondra ...
Endri-javatra sy fampiharana amin'ny tranolay
Features sy Applications Of Party Tent Party tent dia karazana vokatra izay be mpampiasa. Ity vokatra ity dia afaka mampiseho tsara ny azo ampiharina amin'ireo vokatra mifandraika aminy ary mitondra fanampiana bebe kokoa sy tsara kokoa ho an'ny fiainantsika. Avy eo inona ireo fiasa ary aiza no ahafahantsika mampihatra azy. 1. Fampiasana marobe momba ny antoko Folo ...
Fitaovana vonjy maika ho fiarovana anao tsara kokoa
Fitaovana vonjy maika ho fiarovana anao tsaratsara kokoa Dongtai City Winsom Outdoor Product Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2010. Amin'ny maha mpanamboatra matihanina antsika dia manana traikefa maharitra maharitra mandritra ny 10 taona amin'ity orinasa ity ny ozininay, manam-pahaizana manokana amin'ny karazana lay sy gazebos isan-karazany, toy izany toy ny tranolay antoko, sukkah t ...